PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-20 - IMFUNDO YISONA SIKHALI ENGALWA NGASO IMBOKODO
IMFUNDO YISONA SIKHALI ENGALWA NGASO IMBOKODO
Ilanga langeSonto - 2017-08-20 - Izindaba - THANDI ZONDI
WAYENGAKAZE azibone egada iziboshwa empilweni yakhe unkz Ntokozo Mkhize oseqede iminyaka eyi-8 ekulo msebenzi.
Kulesi sikhathi asesisebenze ewujele ejele isevontein emgungundlovu uthi ukuqaphelile ukuthi liselide ibanga okumele lihanjwe ngabesifazane ukuze bemukeleke njengozakwabo kweminye yemisebenzi.
“Njengowesifazane kumele ngincike kowesilisa kulolu hlobo lomsebenzi engiwenzayo. Uma ngihamba emaphaseji kuyaphoqa ukuba ngigadwe ngowesilisa ngoba ngigada iziboshwa zabesilisa yize kungesizo lezo eziyingozi kangako.
“Yize ngikuqonda ukuthi kwenziwelani lokhu kodwa kungenza ngizizwe sengathi ngilahlekile kwazise ngisebenza endaweni egcwele abesilisa,” kuchaza yena.
Uthi ungene kulo msebenzi wokuba wujele emuva kokungawutholi umsebenzi ayewufundele edurban University of Technology okuyicredit Management kanti ngaleso sikhathi wabe esenendondana, esephoqeleka ukuba afune umsebenzi.
Uthi kwaba yinhlanhla enkulu ukuba angene kwezokuhlunyeleliswa kwezimilo ngoba iminyaka aseyiqede khona isimenze wabona ukuthi le ngxenye yomsebenzi ibaluleke kanjani emphakathini.
“Kwaba yisibusiso ukuba ngingawutholi umsebenzi engiwufundele ngoba buka namuhla ngiqeda iminyaka eminingi kanjani ngiwujele.
“Ngalesiya sikhathi isimo besingiphoqa ukuba ngifune omunye umsebenzi ngoba bekumele ngikhulise nomntwana yize bengikuthola ukwesekwa kodwa benginesifiso sokuba ngizenzele mina.
“Ekubeni wujele ngabizwa sengiqale ukufundela ukuba wunesi, kuthe ngisafunde unyaka owodwa, ngaphoqeleka ukuba ngishiye phakathi sengithola lo msebenzi,” kuqhuba yena.
Uthi yize ewuthokozela umsebenzi wakhe kodwa kawulula neze ngoba ugada lonke uhlobo lwezigilamkhuba.
“Ngiyakuthokozela ukuthi nginikwe ithuba lokuba yingxenye yokuhlunyeleliswa kwezimilo kodwa lo wumsebenzi obucayi. Ngiyazama ukuba ngaso sonke isikhathi ngenze umsebenzi wami ngokucophelela.
“Kangangokuba eziboshweni ngakubeka kwacaca ukuthi kangithandi zingibize ngegama. Lokhu ngikwenzela ukuba zazi ukuthi ubudlelwano bethu bugcina kuphi,” kuchaza yena.
Uthi kubalulekile ukuba abesi- fazane banamuhla bangahlali bakhululeke kodwa bazame ngayo yonke indlela ukuphucula izimo abakuzo. Kumanje uthi ufunda unyaka wesine kwezesocial Work.
“Kangisiye umuntu othanda ukugxila entweni eyodwa isikhathi eside. Yingakho sengibone ukuthi ngizame omunye umkhakha kwazise lo engiwufundelayo uma sengiwuphothulile uzongenza ngiqhubeke kulo mkhakha engikuwo vele.
“Ngikhethe ukuba ngiqhubeke nokufunda ngoba ngifuna ukukhula kulo mkhakha. Ezokuhlunyeleliswa kwezimilo zisebenza ngokubambisana nezenhlakahle ngoba sihlumelelisa izimilo,” kusho yena.
Ugqugquzela abesifazane ukuba basukume bazithuntuthe ukuze bakwazi ukunakekela imindeni yabo.
“Ukufunda kungesinye sezikhali okwazi ukulwa ngazo. Ungafundi ngoba ufundela umkhakha othile kodwa ukucosha nje incwadi kubalulekile ngoba kukuvula ingqondo ukwazi ukuxoxa nabantu emazingeni ehlukene empilo.
“Ukubeka imibono yakho ungayivaleli ngaphakathi ngenye yezinto engifisa abesifazane bayifunde, ngiyazi ukuthi sekwejwayeleka ukuthi owesifazane kumele afake ikhanda phansi, kodwa-ke izikhathi sezishintshile, kumele nathi amazwi ethu azwakale ukuze sakhe isizwe.
Ngaphezu kwalokho kubalulekile ukubeka ithemba lakho kuMdali, singakwenza konke uma sisondelene naye.”
Ubalula ukubaluleka kokuchitha isikhathi nomndeni. Uthi yize esebenza ematasa nokufunda nokuba ngumama uthi uyasithola isikhathi asichitha nendodana yakhe.
“Ngisho kungabe ngikhathele kangakanani kubalulekile ukuthi uma ngifika ntambama indodana yami ithole ukudla okuphekiwe, ngibheke umsebenzi wayo.
Uma ngingayile emsebenzini siyazikhipha sixhumane njengomama nendodana,” kusho unkz Ntokozo
ISITHOMBE NGABE: MAIL & GUARDIAN
KAWULULA neze umsebenzi wokuba wujele kwabesifazane ikakhulukazi uma kufanele bagade iziboshwa zabesilisa ngoba nabo bagcina sebedinga ukugadwa.
UNKZ NTOKOZO Mkhize uthi kayikho into emchaza njengokubona abesifazane abamnyama sebephumelele.